Homepages Image News - नेपाली काङ्ग्रेसका विशेषता भन्नु नै आधुनिक राज्य–सञ्चालनका विशेषताहरू हुन् - श्रीप्रसाद जी.टी ,नेता -नेपाली कांग्रेस
Homepage: Image News
समाजवादका हिमायती : स्याङ्जाका श्रीप्रसाद जी.टी. – प्रा.डा. यमबहादुर क्षत्री आफ्नै देशभित्र हामी भौगोलिक विविधता र सांस्कृतिक विविधता देख्दछौँ । यी विविध क्षेत्र र विविध संस्कृतिका बीचमा विभिन्न स्थानका व्यक्तित्वहरूमध्ये केही व्यक्तिहरूलाई विशेष गुणका कारण विशेष व्यक्तिका रूपमा लिन सकिन्छ । कलाका क्षेत्रमा होस् या विद्या र विज्ञानका क्षेत्रमा ... थप पढ्नुहोस्
# इन्द्र रिजाल # राज्यको आत्मा र अस्तित्व रहने दुई पक्ष– यसको बल र बैधतामाथि नियोजित किसिमले गम्भीर हमला हुँदैआएको छ । बल अर्थात सेना, प्रहरी जस्ता सुरक्षा संगठन र बैधताको प्रतिक स्वतन्त्र न्यायालय प्रहारको तारो भएका छन् । मुलुकको सार्वभौमसत्ताको प्रामाणिकता पनि यिनै दुई निकायको जीवन्त र निर्णायक अस्तित्वले प्रतिबिम्बित गर्दछ । यी दुवै पक्ष दलीय राजनीतिभन्दा माथि हुन्छन् भने राजनीतिक ब्यवस्था सँ... थप पढ्नुहोस्
पूर्वराजसभा स्थायी समिति सदस्य गुरुङले दिए २५ रोपनी जग्गा दान
काठमाडौं । पर्वतको महाशीला गाउँपालिका–६ फलामखानीस्थित मणिगाउँका ९१ वर्षीय समाजसेवी शेरबहादुर गुरुङले आफ्नो ९१औं जन्मदिनको अवसर पारेर दुई सामुदायिक विद्यालयलाई जग्गा प्रदान गरेका छन् । स्थानीय मदनआश्रित माध्यमिक विद्यालयलाई १५ रोपनी र फलामखानी आधारभूत विद्यालयलाई १० रोपनी गरी २५ रोपनी जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएका हुन् । तत्कालीन राजसभा स्थायी समितिका पूर्व सदस्यसमेत रहेका गुरुङले दुई विद्यालय... थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । काभ्रे भन्ने वित्तिकै गुण्डा डन र तस्करको उद्गमस्थलका रुपमा परिचय बनाएको छ । काठमाडौंका गुण्डागर्दी गर्ने डनहरुदेखि तस्करी गर्ने अधिकांश धन्दावालाहरुको जन्मभूमी काभ्रे नै रहेको पाइन्छ । कुनै समय तातोपानी नाकाबाट तस्करी हुने नुनदेखी सुनसम्मको धन्दामा पनि काभ्रेलीहरुको बाक्लै सहभागिता रहने गरेको थियो । यताबाट रक्तचंन्दन र खासाबाट सुनको अवैध तस्करीको मुख्य टान्जिट प्वाइन्ट रहेको काभ्रे यति... थप पढ्नुहोस्
ब्याडमिन्टन एसिया जुनियरमा जितसँगै नेपाली खेलाडी दोस्रो चरण प्रवेश
११ साउन, काठमाडौं । इण्डोनेसियामा जारी पेम्वाङगुनाल जया राया ब्याडमिन्टन एसिया जुनियर च्याम्पियनसीपमा नेपाली खेलाडी दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छन् । एसियाली ब्याडमिन्टन संघको आयोजनामा भएको सो च्याम्पियनसीपमा नेपालका प्रफूल महर्जन र रुकेश महर्जन दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका हुन् । कम्बोडियाका डिना साओमलाई २१–११ र २१–८ अङ्कले पराजित गर्दै प्रफूलले दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका हुन् । उनले अब इण्डोनेसि... थप पढ्नुहोस्
९ साउन, सप्तरी । एक समय थियो, सप्तरीमा सशस्त्र जनतान्त्रिक समुह र माओवादी सशस्त्र द्धन्द्धका बेला स्थानीय व्यवसायीहरु त्राहीमाम् थिए । त्यो परिवेश अहिले परिर्वतन भएपनि यहाँका व्यवसायीलाई कहिले मधेशी आन्दोलनले त कहिले सरकारी श्वेत आतंकले सताउन छाडेको छैन् । कुनैपनि व्यवसाय संचालनका लागि स्थायी शाीन्त र उचित लगानी मैत्री वातावरणको खांचो हुन्छ । त्यसो भएमात्र व्यवसाय निर्धक्कसंग अघि बढ्छ । तर व्यापा... थप पढ्नुहोस्
कांग्रेस नेता रेग्मीको ...
सहरजिष्ट्रार नियुक्तिको ...
थारु समुदायमा आएको ...